Xoogaga Al-Shabaab Oo Ka Fal-celiyay Hadal Kasoo Yeedhay Madaxweynaha Burundi | Duul News International
Xoogaga Al-Shabaab Oo Ka Fal-celiyay Hadal Kasoo Yeedhay Madaxweynaha Burundi	(Duulnews)-Al Shabaab ayaa waxa ay ka hadleen hadalkii kasoo baxay Madaxweynaha dalka Burundi ee ku saabsanaa in Shabaab ay qorsheynayaan inay weeraro ka geystaan dalka Burundi.
Hadal kasoo baxay Afhayeenka Ururka Al Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage “Cali Dheere” ayaa waxaa lagu sheegay in hadalka Madaxweynaha Burundi kasoo yeedhay uu yahay mid lagu dejinaayo shacabka dalkaasi ee kacdoonka wada.
Cali Dheere wuxuu kale oo uu tilmaamay in Madaxweynaha Burundi uu indhaha caalamka ka leexinaayo qalalaasaha ka socda dalkiisa iyo aargoosi ay doonayso Xukuumadda sida uu yidhi.
“Warka kasoo yeeray Madaxweynaha Burundi waa isku day lagu doonayo in lagu dajiyo shacabka kacdoonsan ee waddooyinka isugusoo baxay,waana isku day kale oo lagu doonayo in indhaha caalamka looga leexiyo falal aargoosi wadareed ah oo xukuumaddu qorhaynayso.” Ayuu yidhi Sheekh Cali Dheere.
Madaxweynaha dalka Burundi, ayaa shalay sheegay in Shabaabka ay qorsheynayaan inay weeraro ka geystaan dalka Burundi oo ciidamo ay ka joogan Soomaaliya.